Masinina fanamafisam-peo manapaka ultrasonia ampiasaina amin'ny tenona boribory
Ny fanapahana ultrasonic dia tsy mitaky lelan maranitra, tsy mila tsindry be loatra koa, tsy misy fahasimbana sy fahavakisan'ny lafiny mihitsy. Mandritra izany fotoana izany, noho ny fihoaram-pefy ultrasonic, dia kely ny fikororohana, tsy mora ny mifikitra amin'ny antsy. Ny fitaovana toy ny fitaovana viscous sy elastika.
Masinina fanamafisam-peo manapaka ny ultrasonia ampiasaina amin'ny Circular Loom
Ny mpamokatra ultrasonic dia mamokatra angovo mekanika amin'ny fihoaram-pefy mihoatra ny 20000 heny-400000 isan-tsegondra amin'ny lelam-pandrefesana, manapaka ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fanamainana hafanana eo an-toerana izy io, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fitaovana fanapahana.
Jumbo Bag FIBC Machine fanapahana lamba CSJ-2200
Ny milina noforonina manokana dia mampifandray ireo lahasa lehibe isan-karazany amin'ny fanapahana kitapom-paosy jumbo toy ny: Auto. Fihinanan-damba lamba Jumbo, fifehezana ny fizotran'ny sisin-tany (EPC), fanisàna halavany, singa fanatobiana ho an'ny lavaka "O", vovo fametahana ho an'ny "X", famaritana faribolana, fanapahana antsy-Linear, famahanana lamba Jumbo.
Jumbo Bag Fibc Bag Full-Automatic Machine manapaka hafanana CSJ-1350
Ny CSJ-1350, CSJ-2200 ary CSJ-2400 dia milina azo ianteherana sy mahomby natao hamokarana FIBC (kitapo lehibe fanampiny, kitapo Jumbo) takelaka misy ny halavany, izay azo namboarina ho an'ny fanapahana profil araka ny fitakian'ny mpanjifa.
Kitapo Jumbo mandeha ho azy Manadio Machin Air Washer FIBC Cleaner ESP-B
Ny masinina dia manondro milina fanadiovana anatiny manokana, ny milina fanadiovana anatiny ao anaty kitapo kosa dia manondro manokana. Amin'ny dingan'ny fanapahana sy manjaitra kitapo kaontenera, ny lamba fototra dia hiteraka herinaratra mijanona.
PE Nylon Kitapo fanafanana tombo-kase sy fanapahana milina
Ity milina ity dia natao indrindra ho an'ny kitapo PE sy nylon ho an'ny famehezana ny hafanana sy ny fanapahana. Manana tombony ny fihinanana lamba mandeha ho azy, fanerena mafana ho azy, fanapahana ho azy ary fandraisana lamba mandeha ho azy.
Jumbo kitapo vava lamba mihodina milina
Ny milina dia ampiasaina indrindra hanapahana vava kitapo jumbo. Mora ampiasaina izy io. Izy io dia afaka manaparitaka indray mandeha sosona maro, haingana ny hafainganam-pandeha ary mahomby be. Araka ny vokatra samihafa an'ny mpanjifa, manohana ny serivisy namboarina ho an'ny milina izahay.
Masinina fanadiovana kitapo FIBC Jumbo ESP-A
Ny milina fanadiovanay kitapo dia manome vahaolana fanadiovana tsara ho an'ny fibc (kitapo iumbo) ampiasaina amin'ny fampiharana ara-tsakafo sy ara-panafody. mampiasa rivotra efa voasivana, ny fizotran'ny fanadiovana mandeha ho azy an'ity milina ity dia miantoka ny fanesorana ny loto maloto rehetra mandritra ny asa fanapahana sy fanjairana.
FIBC PE Film Auto Bottle Shape Liner Sealing Cutting Machine
Ity milina ity dia manana ny asan'ny ironing ambany, ny fanapahana ny ambany, ny sisiny fanitso, ny famaohana ny vavan'ny tavoahangy ary ny fanapahana vava amin'ny tavoahangy. Mamaha ny olan'ny famokarana tanana ny kitapo fibre jumbo ity. Marina ny masinina, ny fahombiazan'ny milina iray dia afaka manolo ny entan'ny mpiasa 10 farafaharatsiny.
pp milina fanontam-pirinty kitapo
Ny milina fanontam-pirinty PP Woven Bag dia natao manokana hanontana ny teny sy ny mariky ny kitapo tenona sy ny gony misy laminasy, kitapo tsy tenona, kitapo ary taratasy ary koa boaty baoritra. Izy io dia afaka mamita ny pirinty maroloko miaraka amin'ny fotoana iray.
Milina fanenomana kitapo PP sy fanjairana
pp Masinina manapaka kitapo famahanana mandeha ho azy, manome sakafo, manisa mandeha ho azy. Rafitra fitsapana maivana hamantarana ireo vokatra tsy mandeha, fijanonana mandeha ho azy vita amin'ny landy ary asa hafa ao amin'ny iray amin'ireo milina fanapahana kitapo solosaina mandeha ho azy.